भेस्पा र एप्रिलाको स्वरुम गोरखा बजारमै, धमाधम बुकिङ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
भेस्पा र एप्रिलाको स्वरुम गोरखा बजारमै, धमाधम बुकिङ
Published On : ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १०:१३
गोरखा बजारमै पहिलो पटक भेस्पा र एप्रिला स्कुटरको स्वरुम संचालनमा आएको छ । यस अघि बुलेट बाईकको बिक्री गर्दै आएको निलभ अटो टेडर्सले जिल्लामै पहिलो पटक भेस्पा र एप्रिलाको स्वरुम संचालनमा ल्याएको हो ।
‘युवा पुस्तामा यो मोडलका स्कुटरको माग धेरै छ, गोरखा जस्तो पहाडी ठाउँमा ग्राबेल बाटोमा पनि सहज हुने, पावर बढी हुने भएकाले बिक्री बढ्ने अपेक्षा छ’ स्वरुमका संचालक निरोज कट्टेलले भने । एप्रिला २ लाख ४४ हजा ९०० देखि ३ लाख १३हजार ९०० १२५ सिसी १५० सिसी क्षमतामा उपलब्ध छ । यस्तै भेस्पा २लाख ६४ हजार ९४६ देखि ३लाख ९५ हजार९४६ रुपैयाँ मूल्य बरावरको रहको संचालक कट्टेलले बताए ।
‘अहिले धमाधम बुकिङ पनि चलिरहेको छ’ उनले भने ‘५ हजार नगद, ५५ सयको हेलमेट सहित विषेश छुट दिएका हौँ ।’ दशैँ अफरमा अझै विषेश छुट हुने हुन सक्ने उनले बताए । यी मोडलका स्कुटर युवतीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
अबिरल बर्षापछिको पहिरोले धार्चे ३ खोर्ला गाउँको लुङ्गेत खोला जलविद्युत आयोजना बगाएको छ । बिहिबार
गोरखाको धार्चे गाउँपालिका ६ यार्साकी असरी घलेले ७७ वर्षको उमेरमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता
सामुहिक आइसोलेशन रित्तिदै, होम आइसोलेशन भरिदै
लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेशनमा नराख्ने नीति अबलम्बन गरेपछि गोरखाका सामुहिक आइसोलेशन रित्तिन थालेको छ
गोरखाको नारेश्वरमा चोरीका घटना बढ्यो
गोरखा सदरमुकामबाट नजिकै रहेको नारेश्वरमा केही समययता चोरीका घटना बढिरहेका छन् । लकडाउनको अवधिमा मात्र